Baqattoonni Somaaleefi Afgaanistaan 14 baaburaan Masedooniyaa keessatti ajjeefaman - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Baqattoonni Somaaleefi Afgaanistaan 14 baaburaan Masedooniyaa keessatti ajjeefaman
Baqattoonni Somaaleefi Afgaanistaan 14 baaburaan Masedooniyaa keessatti ajjeefaman
Baqattoonni 14 altokko kan ajjeefaman halkan kaleessaa naannoo sa’aa 20:30 GMT osoo daandii baburaa qabatanii dukkana keessa deeman ture kan baaburri imaltoota wolirratti isaan fixe. Baqattoonni kunniin lammiilee Somaaliyaatiifi Afgaanistaan ta’uu poolisiin Masedooniyaa ifa godheera. Yeroo balaan kuni gayutti baqattoota naannoo 50 ta’antu wojjiin imalaa ture jedhama. Bakki balaa kunis miilaafi baaburaan alatti bira gayuun kan hindanda’amne ta’uunis ibsameera.
Baaburri imaltootaa magaalaa Tesaloonqee (Greek) irraa gara magaalaa Beelgireed (Sarbiyaa) imalaati kan ture. Baqattoonni biyyaafi daandii waan hinbeekneef ta’uu hinoolle kan daandii baaburaa qabatanii deemaa turaniif shakkii jedhutu jira. Garuu yeroo baaburri isaanitti dhiyaatutti maaliidhaaf daandii baaburaa gadi dhiisuu isaan dhoorge wonti hanga ammaatti poolisiin biyyattii ifa godhe tokko hinjiru.
Baqaattooni heddu yaalii biyyoota Awrooppaa Dhihaafi Kaabaa seenuu kan eegalan imala Turk irraa gara Greekitti godhaniin. San booda dooniin Xaaliyaanii senuuf carraaqu. Yaaliin kuni hinmilkoofne taanaan miilaafi konkolaataan biyyoota akka Masedooniyaa, Kosovoo, Sarbiyaa fi kanniin akka Sloovaakiyaa qaxxaamuruun Xaaliyaaniifi kanniin biroottis ce’uuf yaalii dadhaabbsiisaafi obsa fixachiisaa godhu.
yaalii awurooppaa seenuu
Previous articleItoophiyaan miidiyaa wolabaa ukkaamsuun addunyaarratti sadarkaa 4ffaa irratti argamti, jedha CPJn
Next articleGabaasa Gammachuu Addunyaa bara 2015tiin Itoophiyaan sadarkaa 122ffaa irratti argamti